Ukwakhiwa kwamadolobha amancane - izitayela zakamuva zokwakheka kweDolobha
Izakhiwo ezincane yiqembu lezakhiwo ezincane ezithinta kakhulu ukubonwa kwesikhala ngabasebenzisi bayo.
Kungenxa yokusebenzisa izinto ezikhethwe ngokucophelela zokwakhiwa okuncane lapho indawo ethuthukisiwe ithatha khona umlingiswa, isichasiselo futhi, ngaphezu kwakho konke, iba nokusebenza.
Ifenisha yasemgwaqweni ithinta indawo ezungezile, kanye nemifino nezakhiwo, okufaka isandla kukho ukuhleleka kwendawo.
Ukwakhiwa kwamadolobha amancane kuba yilokho okuhlukanisa amadolobha.
Eduze kwento ebonakala kakhulu, isikhumbuzo noma indawo, eklanywe ngokucophelela izakhiwo ezincane ingaba yilokho okuzokhunjulwa kakhulu yizivakashi.
Kuzohlotshaniswa nedolobha elinikeziwe. Kuzobahlukanisa enkundleni kazwelonke nakwamanye amazwe.
Ngisho nanamuhla, amadolobha amakhulu anamuhla aqhudelana ngokunye futhi abizwa ngokuthi akhanga kakhulu hhayi kuphela kubavakashi, kodwa futhi nabahlali okuyiqiniso ukuthi ukubukeka kwesikhala somphakathi kubaluleke kakhulu.
Yakhelwe kahle amabhentshi, sheds, amatafula, izimbiza zezimbali kanye nezinto izindawo zokudlala ungavuselela ngempumelelo umakhelwane, uphefumulele umoya omusha kuwo, uwenze ube oyingqayizivele futhi uveze.
Ngenxa yalokhu, abahlali kanye nabavakashi bazokwazi ukuyihambela.
Ukwakhiwa kwamadolobha amancane - imisebenzi
Izinto ezikhethwe kahle sefenisha yasemgwaqweni, ngendlela ecishe ingabonakali, asize ukugcina nokulungisa imisebenzi yokusetshenziswa yesikhala.
Izibonelo ezinhle zingaba njalo okuthunyelweukuvimba isiminyaminya noma isiminyaminya sethrafikhi izimbali ngezimbali.
Ngaso leso sikhathi, zingumhlobiso futhi zivimba izimoto ekupakeleni edolobheni elinqatshelwe noma zikhawulele ukufinyelela ku-promenade.
Esinye isibonelo salolu hlobo yizembozo zezihlahla, ezivikela amagxolo awo ngesikhathi esisodwa, futhi zenze umhlobiso othize.
Kodwa-ke, ifenisha yasemgwaqweni ingaphezu kwakho konke ipaki nefenisha yasemgwaqweni.
Lokhu kufaka izinhlobo ezahlukahlukene amabhentshi.
Uhla olubanzi lwezixazululo luvumela ukusetshenziswa kwezakhi ezihlanganiswe ngokuphelele esimweni esizungezile.
Okuthandwa kakhulu ngamabhentshi okhuni, kepha ikakhulukazi kunamabhentshi wensimbi, kunoma imuphi umbala nesimo, kanye namabhentshi ekhonkolo lobuhlakani, acishe afane nesithombe esibaziwe.
Ngaphezu kwamabhentshi, abasebenzisi bendawo yasemadolobheni ngokuqinisekile bayojabulela ukusebenzisa ama-sunbeds, afanele ngokuphelele hhayi kuphela kwi-boulevard, ogwini ngasemanzini, kodwa futhi nasepaki, ebhekene nemisebe yelanga.
Idizayini Yefomu Ledolobha
Le nkampani ingumsabalalisi oholayo wemikhiqizo yesimanje yempahla yasendlini Idizayini Yefomu Ledolobha.
Isebenza ngqo ne studio yezokwakha nabaqambi, ukuze bakhethe isitayela esihle kakhulu nezici ezisebenzayo zezinto ezincane zokwakha.
Ngaphezu kwalokho, kuyasekelwa Inhlangano Yezakhiwo Zokwakha Umhlaba, ngokubambisana okuqondile, kanye nokunikeza izixazululo zakamuva nemikhiqizo.
ICity Forum Design ingummeleli okhethekile wezinkampani ezinhle kakhulu zase-Italy ePoland - I-Metalco, I-Bellitalia futhi Idizayini Yedolobha.
I-Metalco - insimbi nezinkuni
Ukwakhiwa kwamadolobha amancane kuyisihloko inkampani yase-Italy esazi kahle I-Metalco.
Inikeza ngemikhiqizo ehlukahlukene, ikakhulukazi ezigabeni ezilandelayo: izakhiwo ezincane zensimu futhi kancane izakhiwo zasemadolobheni.
Ukunikezwa kweMetalco kufaka phakathi okuhle kakhulu izixazululo ukuthuthukiswa okumnandi nokusebenzayo kwamapaki, imigwaqo, izingadi neziteshi.
IMetalco ikhiqiza amabhentshi asepaki, amabhentshi asengadini, amabhentshi asedolobheni, amabhentshi esiteshi - womabili amabhentshi enziwe ngokhuni nawensimbi.
Ngaphezu kwalokho, ukunqunyelwa kwale nkampani kufaka obhasikidi basemgwaqweni, okuthunyelwe, amabhodi olwazi, izembozo zezihlahla, izimbiza zezimbali, izitebhisi zamabhayisekili, izithiyo zotshani nezinhlobo ezahlukahlukene zefenisha yasemgwaqweni: ama-deckchairs, afanele i-pier, i-boulevard, kanye nepaki noma ingadi yedolobha.
I-Bellitalia - izakhi zikakhonkolo namatshe
I-Bellitalia ingenye yezinkampani ezihola phambili zokukhiqiza zaseYurophu okuhlanganisa ukhonkolo wedolobha kanye netshe lemvelo, eyaziwa ngezixazululo zayo zokwakhiwa okuncane nokwakhiwa kwendawo.
Le nkampani isisebenze iminyaka engaphezu kwengama-40, ihlukanisa ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ukusungula izinto ezintsha kanye nomklamo wanamuhla.
Ifenisha yomgwaqo ngaphakathi amaphrojekthi Izinkampani zeBellitalia ngokuyinhloko zisebenza ngopaki ukhonkolo, ingadi kanye namabhentshi wedolobha. Amabhentshi wegumbi lokuhlala avame ukuba yinto eyodwa ephumelelayo, adala isithombe esibaziwe.
Ngaphezu kwalokho, iBellitalia inikeza izimbiza eziningi zikakhonkolo nezitshe, hhayi izimbali ezingashadile noma imibhede yezimbali, kodwa nezihlahla zomhlobiso.
Ngaphezu kwalokho, iBellitalia ikhethekile ekwakhiweni kwemithombo, okuthunyelwe okuhlukanisa noma okukhinyabeza ithrafikhi kwizindawo zokudlala kanye nezinkundla zokudlala, kanye namabhinala aqinile enziwe ngodaka ukhonkolo, itshe noma itshe lokulingisa.
Idizayini Yedolobha - Idizayini yanamuhla
Ukwakhiwa kwengadi encane, amabhodi okuma, amabhodi wolwazi ngemfashini enemfashini.
Amabhentshi epaki adonsa amehlo ngomklamo wanamuhla. Izakhi zokuhlobisa, izimbiza zezimbali, izicubu zothuli, izindawo zokukhosela amabhasi, noma ukuvimbela okuthunyelwe ukuhamba komgwaqo kungenye yemikhiqizo yenkampani yokwakha izakhiwo zasemadolobheni Idizayini Yedolobha.
Izinga eliphakeme lekhwalithi lemikhiqizo yeCity Design liqinisekiswa ngokulawulwa okuqhubekayo kwezinto zokwenziwa nezinqubo zobuchwepheshe.
Ngale ndlela Idizayini Yedolobha iyakwazi ukukuqinisekisa ukuqina okuphezulu kwemikhiqizo yayo, kanye nokuhambisana namazinga, ukuphepha, i-ecology, aesthetics kanye nokunethezeka komsebenzisi.
izithiyo zotshaniukhiyeizimbaliobhasikidi basemgwaqweniamabhentshi esiteshiAmabhentshi edolobhaAmabhentshi engadiAmabhentshi epakiBeka amabhentshi ensimbiumsabalalisi omncane wokwakhaizakhiwo ezincane zasemadolobheniizakhiwo ezincane zensimuumthetho omncane wokwakha izakhiwoumkhiqizi omncane wezakhiwoizakhiwo ezincane engadiniifenisha yasemgwaqwenionogada besihlahlaizindawo zokudlalaokuthunyelweama-rack amabhayisekiliamabhodi wolwazi